Sunflower Powder - Emeputa Factory
Sunflower ntụ ntụ (ihe ọ solidụ solidụ siri ike) bara ọgaranya nke ọdịnaya nke amino acid na vitamin E, A, C mgbe mmịpụta na enzymolysis ndu. Sunflower ntụ ntụ (ihe ọ solidụ solidụ siri ike) bụ nke a na-ejikarị micro-molecules nwere ngwugwu molekụl na-erughị 1000u, nke dị mfe nke ahụ mmadụ na-etinye obi ya ma nwee oke itinye n'ọrụ.
Sunflower ntụ ntụ vidiyo
Sunflower ntụ ntụ nkọwa
Product Name Sunflower ntụ ntụ
Emeputa ndu onwe Emegheghị ọnwa 24
Agba White ma ọ bụ odo odo
Sịkwa akwa Tigwe Na-echekwa na ụlọ okpomọkụ na kwesịrị enịm ke jụụ na nkụ.
Emepechara, mebie ya ozugbo enwere ike ichedo ngwaahịa ndị ahụ na mmiri na agglomeration.
Antinye Nri, mmezi nlekọta ahụike, nri ọrụ.
Gịnị bụ Sunflower ntụ ntụ?
Sunflower ntụ ntụ (ihe ọ solidụ solidụ siri ike) na-enweta site na sunflower ntụ ntụ, site na ọtụtụ usoro
dị ka akụrụngwa nhọrọ, mmịpụta, ndu enzymolysis, ihicha na nkwakọ, wdg
Sunflower ntụ ntụ (ihe ọ solidụ solidụ siri ike) bara ọgaranya nke ọdịnaya nke amino acid na vitamin E, A, C mgbe mmịpụta na ndụ enzymolysis. Sunflower ntụ ntụ (ihe ọ solidụ solidụ siri ike) bụ nke a na-ejikarị micro-molecules nwere nkwonkwo ngwongwo metụtara nke na-erughị 1000u, nke dị mfe na-emetụta mmadụ site na ya ma nwee oke itinye n'ọrụ.
Kedu uru nke Sunflower ntụ ntụ?
Na-enyere aka idozi uric acid ma nweta gout ka mma
Imirikiti ọgwụ ndị dị maka ọgwụgwọ gout na hyperuricemia bụ ọgwụ ọgwụ, nke nwere nsị na nsonaazụ ọzọ. Ya mere, ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-etinye aka n'ịchọpụta ihe ndị dị ndụ na-arụ ọrụ nke mmetụta dị mma na nsị dị ala site na osisi ndị sitere n'okike. Dika nkwenye ogwu ogwu nke ogwu ogwu na ihe omumu nke oge a, sunflower nwere otutu ihe ndi ozo. Na nyocha nke wepụ sunflower, achọpụtara na sunflower wepụ na-ebelata ọbara uric acid ọdịnaya ruo n’ókè ụfọdụ ma nwee ụfọdụ ihe mgbochi na-arụ ọrụ nke xanthine oxidase na òké ọbara.
Inwe ala ala prostatitis na prostatic hyperplasia improved
Adịghị ala ala prostatitis bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị ọrịa n'etiti n'etiti agadi nwoke. Imirikiti ndị ọrịa nwere ụdị mgbaàmà kachasị dị ka urination siri ike, na-atasịsị mgbe urination na ọnya nke aka na ụkwụ. Dị ka akwụkwọ akụkọ ahụike si kwuo, ọnụego ọgwụgwọ ahụ ruru 80% n'etiti ndị ọrịa 100 a kpọtụrụ aha na mbụ bụ ndị ejiri ntụ ntụ mee ihe. Propatic hyperplasia bụkwa ọrịa na-adịghị ala ala nke ụmụ nwoke meworo okenye, nke omume ha ruru ihe karịrị 75%. Mgbe ndị ọrịa richara ntụ ntụ, enwere mgbochi na hyperplasia gland, na-ebelata na olu glandular, na mmelite na ọrụ endocrine.
Mee ka mmiri nwee ume umeji
Bee pollen nwere mmetụta doro anya na ọrịa cirrhosis na-egbu egbu nke ị byụbiga mmanya ókè na-aba n'anya, ma na-arụzi ọrụ imeju ozugbo enwere ike.
Mmetụta na usoro obi
Ifuru ntụ nwere ọgaranya na vitamin na ụfọdụ ogige flavonoids, nke nwere mmetụta dị mma na mmelite nke ike okpu, yana mgbochi na ọgwụgwọ nke ọrịa ịmị mkpụrụ, ọbara ọgbụgba, ọbara ọgbụgba, ọbara mgbali elu, na varicosity.
 Ọmụmụ ihe na Anti-Gout na Anti-hyperuricemia Arụ ọrụ nke Sunflower Head Extracts.
 Nri na nlekọta ahụike nke ntụ ntụ.
 Nchịkọta nke Pollen Nutrition na Ọrụ.
 Nri na nlekọta ahụike nke pollen.
Ọkpụkpụ Bovine Collagen peptide ntụ ntụ